Kachasị mma na akwụkwọ ahụ aja na 18: 9 ihuenyo | Gam akporosis
Akwụkwọ ahụaja kachasị mma na ihuenyo 18: 9
Eder Ferreño | | Nkuzi
Otu n'ime ọnọdụ ndị anyị na-ahụ n'ahịa kemgbe afọ gara aga bụ ekwentị nwere ngosipụta 18: 9. Ndị a bụ ekwentị nwere ngebichi na-enweghị okpokolo agba. Yabụ oke a abụrụla nke ọma na ahịa. Ọ bụ ezie na ọbịbịa ya enweghị nsogbu. Ebe ọ bụ na ọ dị mkpa maka ngwa ahụ iji gbanwee ya.
Ọzọkwa na akwụkwọ ahụ aja nwere imeghari ka a ọhụrụ ihuenyo usoro. Yabụ, anyị na-ahụta akwụkwọ ahụ aja nke edoziri maka ụdị ihuenyo a. N'ebe a, anyị hapụrụ gị nhọrọ.
A na usoro nke na akwụkwọ ahụ aja na-emegharị ka 18: 9 ruru. Yabụ ọ bụrụ na inwere ekwentị nwere ngebichi a, ha nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ iji ha. Na mgbakwunye, nzụlite ndị a niile anyị họrọpụtara na-apụta ìhè maka oke ogo ihe oyiyi.
Ya mere, ha ga-adị mma na ngwaọrụ gị. Ebe obu ihe putara ihe bu na usoro a kariri ihe ndi ozo. Ọ bịarutelarị ka ọ nọrọ n'ahịa ahụ. Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu na-eji ya eme ihe, ọ bụghịzi naanị ya na njedebe dị elu. Enwere mobiles dị ọnụ ala nke na-ejikwa usoro a.
Not gaghị agbaghara anyị ngalaba na akwụkwọ ahụ aja
1 Mara mma
2 Ọchịchịrị iji chekwaa batrị
Ọ bụrụ na ị nwere a ekwentị 18: 9 ruru, ijide n'aka na ị chọrọ akwụkwọ ahụ aja. Onye ọ bụla nwere ike inwe echiche dị iche banyere ihe mara mma, mana ha bụ nzụlite nke na-enye obi ụtọ ịhụ, na-enwekarị ekele maka ngwongwo ha dị mma ma ọ bụ iji agba dị mma. Ya mere, n’okpuru anyị ga-ahapụrụ gị ụfọdụ akwụkwọ ahụaja mara mma nke ị ga-eji gbanwee ekwentị gị gam akporo. Họrọ nke kacha amasị gị n'okwu a:
Ọchịchịrị iji chekwaa batrị
Ọ bụrụ n’inwere ekwentị nwere panel OLED ma ọ bụ AMOLED, iji akwụkwọ ahụaja gbara ọchịchịrị bụ ihe nwere ike ịmasị gị. Typesdị nzụlite ndị a na-eme ka pikselụ rụọ ọrụ n'adabereghị, yabụ ọ bụrụ na ejiri ntọala gbara ọchịchịrị, pikselụ na-arụ ọrụ ga-adị ole na ole na ekwentị. Yabụ, ị na-echekwa ike site na iji akwụkwọ ahụaja. Ihe omume nke anyi kwurula banyere ya n'oge gara aga, na nke ahụ bụ ezigbo enyemaka iji buru n'uche.
Kechioma enwere ọtụtụ akwụkwọ ahụ aja na anyị nwere ike iburu n'uche n'echiche a, na ha ga-enye anyị ohere iji ohere OLED ma ọ bụ AMOLED nke ngwaọrụ iji chekwaa ike. N'okpuru ị nwere ike ịchọta ego ole na ole iji tụlee:
Ọ bụrụ na anyị ga-eji akwụkwọ ahụaja na ekwentị, ọ kachasị mma na ọ ga-abụ mkpebi kacha mma. N'ihi na, anyị kwesịrị ịchọ ndabere nke dị na HD, maka ọdịdị ka mma na ahụmịhe oge niile na ekwentị. Họrọ nke HD na akwụkwọ ahụ aja bụ dabara nke ọma ezi, na ọtụtụ iche iche. Ya mere ọ dị mfe ịchọta otu nke ga-adabara na ihuenyo 18: 9 nke ekwentị gam akporo gị. Naanị ị ga-ahọrọ n'etiti ụfọdụ nhọrọ ndị dị.
Iji nweta a ka mma utịp, nke ga-abụ-akpali nnọọ mmasị anya, iji 3D na akwụkwọ ahụ aja bụ mgbe a ezi nhọrọ iji banye na akaụntụ na gam akporo. Anyị na-achọta ego zuru oke nke ụdị a, nke na-enye anyị ohere ịgbanwe ekwentị na -emepụta mmetụta na-adọrọ mmasị. Ha na-apụ karịa nke ndị ọzọ n'ọhịa na akwụkwọ ahụ aja, ị na-enwetakwa ihe na-eme ka ọ masị gị.
Ya mere, o yikarịrị ka ọtụtụ n'ime gị enweworị ekwentị nwere ihuenyo 18: 9. Y’oburu n’inwe ndi obi uto, ndia yi na akwụkwọ ahụ aja ha nwere ike ịmasị gị. Ya mere egbula oge ibudata ha, n'ihi na ha nwere ike ịbụ uzo ozo di nma na nke ndi n'enye gi.
Ọ bụrụ na otu n'ime ego ndị a masịrị gị, naanị ị ga-pịa ya. Ihe oyiyi ahụ ga-emeghe na taabụ ọhụrụ ma ị nwere ike ịchekwa ndabere ahụ ozugbo na ekwentị gị. Anyị na-atụ anya na nhọrọ a mobile na akwụkwọ ahụ aja na 18: 9 ihuenyo bụrụ mmasị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Akwụkwọ ahụaja kachasị mma na ihuenyo 18: 9
The Galaxy S9 igbe leaks na ikpeazụ nkọwa na ọtụtụ ịtụnanya
Goole chọrọ ịmalite ngwaọrụ na ndị ọkà okwu wuru na ihuenyo